Ny fanambin'ny Marketing Automation an'ny mpivarotra, ny mpivarotra ary ny CEO (Data + Advice) | Martech Zone
Zoma, Jolay 27, 2018 Asabotsy 13 Febroary 2021 Mór Mester
Ny Marketing Automation dia ampiasain'ny orinasa lehibe hatrizay niainany. Io fisehoan-javatra io dia nampiavaka ny teknolojia marketing tamin'ny lafiny maro. Ny vahaolana voalohany dia (ary ny ankamaroany dia mbola) matanjaka, manankarena endri-javatra ary noho izany dia sarotra sy lafo. Ireo rehetra ireo dia nanasarotra ny fametrahana orinasa automatique marketing ho an'ny orinasa kely kokoa. Na dia misy orinasa kely aza afaka mividy lozisialy automatique marketing dia manana fotoana sarotra izy ireo amin'ny famoahana tena lanja amin'izany.
Nahasosotra ahy io fironana io satria ny orinasa kely manana loharanom-bola voafetra dia tena afaka mahazo tombony amin'ny fampiasana automatisation marketing. Ny fampiasana automatisation dia afaka mampitombo ny famokarana ary avy eo mahazo be dia be. Mampalahelo fa ny ankamaroan'ny vahaolana amin'izao fotoana izao dia tsy natao ho an'ny orinasa madinidinika.
Noho izany, amin'ny naha-mpivarotra tao amin'ny orinasan'ny SaaS automation marketing ahy dia nahatsapa aho fa adidiko ny mamantatra ireo zavatra sarotra amin'ny mpivarotra. Izany no nataoko tamin'ny alàlan'ny fandinihana matihanina maherin'ny 130 miasa amin'ny marketing.
Saingy nahatsapa aho fa tsy ampy izany. Te hizara ireo fomba fijery sy data rehetra ireo aho ka nanao a lahatsoratra manodidina ary nanoratra an epic 55 pejy tatitra feno data hizara an'izao tontolo izao ny zavatra hitako. Ity lahatsoratra ity dia manasongadina ny fikarohana sasantsasany sy ny angon-drakitra momba ny tatitra. Fanampin'izay, noraisiko an-tanana ny torohevitra momba ny automatisation tsara indrindra nomen'ny manam-pahaizana nandritra ny fikarohana nataoko.
Sintomy ny tatitra feno
Fanadihadiana momba ny varotra automatisation momba ny varotra
Andao hiresaka kely momba ny fizarana ny haben'ny orinasa, ny toerana misy ny mpamaly ary ny indostria iasan'izy ireo. Io no hametraka ny angona rehetra ho avy.
Vokatry ny orinasa - Amin'ny fikarohana nataoko, ny 90% amin'ireo namaly dia avy amin'ny orinasa misy mpiasa 50 na latsaka. Midika izany fa misolo tena be loatra ny orinasa madinidinika sy bitika. Andao horavana kely ity. Maherin'ny antsasaky ny mpamaly (57%) no miasa amin'ny orinasa misy mpiasa 2-10. Ny fahadimy (20%) amin'ireo valiny dia avy amin'ireo orinasa misy mpiasa 11-50. Fandraisana anjara 17 (13%) dia avy amin'ny solopreneur.
Toerana - Ny fandefasana betsaka indrindra (38%) dia avy amin'ireo matihanina miasa amin'ny toeran'ny Growth toy ny Marketing sy Sales. 31% amin'ireo mpamaly amin'ny fanadihadianay dia tompona orinasa. Ny ampahefatry ny mpandray anjara (25%) dia CEO. Ireo vondrona telo ireo dia mandray ny 94% amin'ireo fandefasana.
Indostria - Miankina amin'ny Marketing ny fizarana indostria eo amin'ireo mpamaly, miaraka amin'ny 47%. Niniana natao izany satria nanangona ny angon-drakitra izahay ka tokony ho ny antsasaky ny mpamaly dia avy amin'ny sehatry ny varotra. Ny indostrian'ny fampandrosoana ny lozisialy dia tonga tamin'ny laharana faharoa tamin'ny fanadihadiana, miaraka amin'ny 25% amin'ireo fandefasana avy amin'ity orinasa ity.
Tsara daholo ireo angona matsiro rehetra ireo, saingy tonga teto ianao mba hamaky momba ny fanamby amin'ny automatisation marketing, sa tsy izany? Ka aleo tonga eo!
Fanamby amin'ny automatisation lehibe
Ao amin'ny fanadihadianay, ny 85% ny valinteny dia mampiasa karazana automatique marketing.
Ny fanamby mahazatra indrindra atrehin'ny olona amin'ny automatisation marketing dia ny famoronana automatique de qualité, miaraka amin'ny 16% ny respondent manonona izany
Miorina amin'ny angon-tsainay, ny fampidirana (14%) dia fanamby fitsikerana hafa atrehin'ireo mpampiasa amin'ny teknolojia automatique marketing.
Mitaky atiny be dia be ny automatisation marketing. Tsy mahagaga raha tonga tamin'ny laharana fahatelo ny famoronana atiny, miaraka amin'ny 10%.
Fanambadiana (8%) dia fanamby lehibe iray hafa ary mifandray akaiky amin'ny atiny. Ny automatisation dia mitaky atiny avo lenta avo lenta hananganana fifamofoana.
Ny fizarana, ny fitantanana angon-drakitra ary ny fanatsarana dia notononin'ny 6% n'ny mpandray anjara ho fanamby amin'ny automatisation marketing.
Ny fahitana fitaovana (5%), personalization (5%), scoring scola (5%), analytics (4%), reporting (3%), ary ny fahafaha-mamonjy (1%) dia voalaza fa fanambin'ny sasany amin'ireo matihanina nanaovana fanadihadiana. .
Ho avy, hojerentsika ny fahasamihafan'ireto fanamby ireto eo amin'ny sokajy roa: ny fitomboana (Marketing & Sales) sy ny CEO.
Ny fanamby ara-barotra amin'ny automatisation amin'ny olona amin'ny toeran'ny fitomboana
Ny matihanina momba ny fanamby sy ny varotra matetika resahina dia ny famoronana automatique (29%), amin'ny taha ambony
Ny fampidirana dia fanamby lehibe iray manampahaizana manokana amin'ny sehatry ny fitomboana miatrika ny automatisation marketing, miaraka amin'ny 21% amin'ireo namaly no nanondro izany.
Ny famoronana atiny dia tonga tamin'ny laharana fahatelo tamin'ny 17% amin'ireo matihanina amin'ny fitomboana nanonona azy.
Ny fizarana dia notontosain'ny 13% n'ireo mpamaly avy amin'ny toeran'ny fitomboana.
Ny fitantanana ny angon-drakitra sy ny isa isa dia natondro fa fanambin'ny 10% ny mpandray anjara.
Ny fanamby hafa tsy dia voatonona matetika dia misy: personalization (6%), optimization (6%), fiankohofana (4%), fitaovana fitadiavana (4%), analytics (4%), ary tatitra (2%).
Ny fanambin'ny Marketing Automation an'ny CEO
Ny fahasarotan'ny automatisation marketing no fanamby voalohany ho an'ny CEO, miaraka amin'ny 21% amin'ireo mpandray anjara amin'ity toerana ity no mitondra izany
Amin'ny orinasa bitika sy kely dia matetika ny CEO izay manapa-kevitra hoe inona no mitambatra rindrambaiko ampiasain'ny orinasa. Ka tsy mahagaga raha fanamby lehibe ho azy ireo ny fampidirana (17%) sy ny fikarohana fitaovana (14%).
Ny fifamotoana amin'ny fifamoivoizana amin'ny hafatra momba ny varotra mandeha ho azy dia naseho fa fanambin'ny 14% an'ny CEO.
Ny famoronana automatisation (10%) dia tsy dia voatanisan'ny CEO intsony noho ny matihanina amin'ny fitomboana sy ny tompona orinasa. Ny anton'izany dia ny ankamaroan'ny CEO izay tsy miatrika famoronana automatique.
Ny fitantanana ny angon-drakitra sy ny fanatsarana dia samy natsangan'ny 10% amin'ireo mpamaly amin'ny anjara asan'ny CEO.
Ny sasany amin'ireo fanambin'ny CEO tsy dia voalaza loatra dia ny famoronana atiny, fanaingoana manokana, fizarana, tatitra ary fanadihadiana, ny tsirairay tamin'ireo dia niseho tamin'ny valinteny 7%.
Torohevitra momba ny varotra mandeha amin'ny varotra automatique avy amin'ny manam-pahaizana sy mpampita
Araka ny efa nolazaiko dia nanontany ireo mpampiasa automatique marketing izahay
"Inona no holazainao amin'ny olona iray izay vao nanomboka tamin'ny automatisation marketing? Inona no tokony hojereny? ”.
Nisafidy ny sasany amin'ireo valiny tsara indrindra aho, azonao atao ny mamaky ny teny nalaina rehetra tamin'ity fihodinana ity.
Ny SaaS guru sy mpanorina ny SaaS Mantra, Sampath S dia nilaza fa raha ny momba ny fanombohana automatisation marketing dia tokony hifantoka amin'ny:
Ryan Bonnici, ny CMO an'ny G2Crowd dia nizara ihany koa ireo torohevitra mahafinaritra tokony hojeren'ny mpivarotra amin'ny voalohany:
Ny mpanorina ny Ghacklabs, Luke Fitzpatrick dia manasongadina ny maha-zava-dehibe ny fikasan'ny olombelona amin'ny automatisation marketing:
Nix Eniego, Lehiben'ny Marketing ao amin'ny Sprout Solutions dia nanoro hevitra ireo vao manomboka ny automatisation marketing hifantoka amin'ny voankazo mihantona ambany ary mamolavola drafitra ankapobeny alohan'ny hitsambikina ao anaty akorandriaka.
Feno azy io
Andao averintsika ireo olana lehibe. Raha ny momba ny mpampiasa automatisation marketing amin'ny toeran'ny fitomboana dia ny fanamby lehibe indrindra dia ny:
Etsy ankilany, ireo CEO izay miasa miaraka amin'ny automatisation marketing dia sarotra amin'ny:
Tags: mamorona automatique marketingautomation marketingfanamby amin'ny automatisation marketingfahasarotana amin'ny automatisation marketingatiny mandeha ho azy amin'ny marketingfamoronana votoaty automatique marketingfampidirana automatique marketingsehatra marketing automatiquefitaovana automation marketing
Mór Mester no Lehiben'ny Marketing ao Automizy, SaaS automatique marketing amin'ny mailaka mora ampiasaina. Ny tanjony dia ny manampy ny orinasa kely sy ny maso ivoho hametraka automatique marketing mba hampitomboana ny vokatra sy ny fidiram-bola vokatr'izany.
Ahoana ny fomba hanodinana ireo mpampiasa miorina amin'ny toerany ao amin'ny WordPress